Iran: Polisy Nandaka Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Iran: Polisy Nandaka Vehivavy
Voadika ny 15 Jona 2017 18:21 GMT
(Marihina fa tamin'ny 16 may 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Miady amin'ny vehivavy amin'ny lafiny roa fara fahakeliny ny manampahefana Iraniana. Andaniny, nalefa tany am-ponja ary nenjehina ny mpikatroka vehivavy nanao hetsi-panoherana ho amin'ny fitovian-jo. Ankilany, manohy ny famoretana manerana ny firenena ny polisy Iraniana izay mikendry ny hankatoavan'ny vehivavy ny fehezan-dalànan'ny akanjo Islamika ao Iran. Mbola mitohy hatrany ny zava-misy na dia efa nitsikera ny fihetsiky ny polisy aza ny lehiben'ny fitsarana, Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroud. Norahonana ireo vehivavy an'arivony ary nosamborina ny an-jatony noho ny fanaovana voaly malalaka loatra na akanjo mifinjifinjy loatra .
Mampiseho ny fihetsika maherisetran'ny mpitandro ny filaminana Iraniana ity lahatsary manaraka ity . Mihoatra ny 38.000 ny mpijery azy tao amin'ny YouTube hatramin'ny fotoana nanoratana.
Nilaza i Nasrin [Fa] fa fanalam-baraka ho an'ilay antsoina fatratra hoe ‘Hezbollah’ ny fihetsiky ny polisy amin'ny vehivavy. Mampiasa hery izy ireo raha tokony hampiasa teny, na zavakanto na fomba fieritreretana fotsiny. Nilaza ihany koa izy fa nanao fanangonan-tsonia ny mpianatra miisa 4.000 ary nanao hetsi-panoherana manohitra ny famoretana atao amin'ny vehivavy vao haingana.
Nosamborina i Zeynabeh Peyambarzadeh, vehivavy mpikatroka sady mpanao gazety. Araka [Fa] ny Meydan, manana olana amin'ny aretim-po i Zeynab ary tsy nahavita nandresy lahatra ny manampahefana tao amin'ny fonja ny fianakaviany tamin'ny fandefasana fanafody sy fitafiana. Mpikatroka ara-tsosialy sy ara-kolontsaina ary olo-malaza mihoatra ny 500 no nanao fihetsiketsehana manohitra ny fitazonana azy.